Automatic အတွင်းဆေးရုံတံခါးဆွဲယူ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ဆေးရုံတံခါးဒီဇိုင်း,ဆေးရုံအခန်းတံခါး Size ကို,လျှောတံခါး roller
Home > ထုတ်ကုန်များ > အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါး > တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ > Automatic အတွင်းဆေးရုံတံခါးဆွဲယူ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတံခါးကိုလျှောစီတံခါးကိုအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကဝိုင်းလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုအတွင်းစိတ်ဘောင်နှင့်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုပျားလပို့ပြားနှင့်အတူစီတန်းတစ်ခုတည်းတပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်, စုံလင်သောကုသမှုမွငျ့မားရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိတျထားရှိပါတယ်, မှအရည်အသွေးမြင့် EPDM အထူးရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ထားမျက်နှာပြင်ပိတ်ထား စုံလင်သောချောမွေ့စွာတံဆိပျရှိစေသတည်း။ အရည်အသွေးမြင့်ရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည်အရောင်စင်ကြယ်သော polyester electrostatic အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူအားလုံးအရည်အသွေးမြင့်အအေးရှင်းပြီသံမဏိများတွင်အသုံးပြု Bao သံမဏိသံမဏိဘုတ်အဖွဲ့, မျက်နှာပြင်။ GB5237.4-2000 (ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများ QUALICOA D နဲ့အညီ) စံ, ထင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီက၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်။ တံခါးကိုစာနယ်ဇင်း (ဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေ X-Ray ထုတ်လွှတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်) နံရံအထူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသွင်မြင်လာအောင်, နံရံ 2mmpb ထူဆီသို့အကာအကွယ်ကြိုး, အခြား 1mmbp ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အထူ။ အဆိုပါဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတံခါးကို sagging ရှောင်ရှားရန်သက်ရောက်မှု၏အချက်ပြောင်းလဲနေတဲ့သမရိုးကျပတ္တာကနေမတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့, အပေါ်တွင်မူတည်ပိုမိုတာရှည်ခံအကာအကွယ်တံခါးကိုအောင်, သင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖွင့်လှစ်။
1. အတွင်း၌တံခါးမှ PU မွှုပျထ XPS နှင့်ပြည့်စုံသည်။ တံခါးကိုကောင်းသောကွေးအစွမ်းသတ္တိ၏ဖြစ်ပြီး -static ပလပ်စတစ်နှင့်အတူကောင်းသော fireproof စွမ်းဆောင်ရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသံမဏိပက်ဖျန်းပေးခဲ့သည်။
2. ဒါဟာအထူးလူမီနီယံနှင့်တစ်ဦးအထူးဒီဇိုင်းတံဆိပ်ခတ်ချွတ်တံခါးကိုကောင်းတစ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်အစုံအတွက်မွေးစားထားတဲ့၏အစွန်းပတ်လည်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ၏ပြင်းထန်သောရာသီဥတု environments` လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။
LED Display ကို `operation` နှင့်အတူအသငျ့ 3. ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
4. ပါဝါဆေးရုံတံခါးများမော်တာ၏လျှော့ချအထူးထုတ်လုပ်ဖြစ်သင့်သည်။ ထိုသို့သန့်ရှင်းသောအခန်းများ၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ဆူညံသံ minimize နိုင်ပါတယ်။
5.The ချိန်ညှိတံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ရပ်ဆိုင်းမှု device ကိုထိထိရောကျရောတံခါးကိုလိုအပ်သောပိတျထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရောက်ရှိအောင်, ဆင်း, ထ, လေးလမ်းညွန်ထံမှလက်ဝဲနှင့်လက်ယာတံခါးကိုညှိနိုင်ပါတယ်။
6. အဆိုပါလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းမှနှောင့်အယှက်များကိုရှောင်ရှားရန် EMC ၏အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းမှကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဆေးရုံလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခန်းအဖြစ်သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ, ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, တိကျကိရိယာများစက်ရုံများ, အစားအစာဆိုင်, ဓာတ်ခွဲခန်း access ကို port အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဆေးရုံတံခါးဒီဇိုင်း ဆေးရုံအခန်းတံခါး Size ကို လျှောတံခါး roller သတ္တုတံခါးဒီဇိုင်း ဆိုင်တံခါးဒီဇိုင်း အလူမီနီတံခါးဒီဇိုင်း လျှောတံခါးဒီဇိုင်း သစ်သားသီးနှံတံခါးဒီဇိုင်း